ခင်ဦးသာ| January 30, 2013 | Hits:10,653
| | ကချင်စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရန် ယခုလဆန်းပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
Khun Kyi January 30, 2013 - 5:04 pm That too bad.Shouldn’t happened it and must not happen again.Mayan Villagers are so angry to both sides.Because,KIA,hit and run from around this village.Daw Bout Jar(I can’t spell) knew it too.These two bastard gangs must be stay away from villages.And,kachin are less than 50% in this village.
Reply minmin January 30, 2013 - 7:40 pm rfa .bbc.boa.dvb.သတင်းဌာနတွေလို့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက မလုပ်လိုက်ပါနဲ့နော်..အစိုးရ တပ်မတော်က တိုက်တာတွေပဲ ပြောပြောနေတယ် ..ကေအိုင်အေ က ပေါ်တာဆွဲတာတို့ ပူတာအိုလမ်းမှာကားတွေ မိုင်းဆွဲ မီးရို့တာတို့ ကိုဘာတစ်ခုမှ မမေးဘူး …
Reply TAYZA January 30, 2013 - 7:40 pm That is real Myammarh Tatmadaw.
Reply ဂျာနော် January 30, 2013 - 9:10 pm ကေအိုင်အေ ကိုရော မပစ်ရပ်ဖို့ ဘယ်သူ အာမခံပြောရဲပါသလဲ … ရှိရင် အွန်လိုင်းမှာ တင်ပေးပါ။
Reply than January 31, 2013 - 3:24 am F****d burma tatmadaw no one belive ur myawaddy media(liaer media)the truth will coming soon,the truth can’t hidding u guys know?What the shame on tamadaw.
Reply AunG January 31, 2013 - 4:43 am Bad burma army, their action is very wrost than Japan Facsism and Nazi German…how Ridiculous…
Reply Reader January 31, 2013 - 4:04 pm News is different between bbc and irrawaddy.This news is more perfect,if irrawaddy wrote(2 civillians was killed in Mayan village when fighting between Kia and Government army). So,people can know this is not reasonless shot by government army. Want to read fair and true news.
Reply ho January 31, 2013 - 6:06 pm ဒီလိုပါဘဲ စစ်တပ်က ညည ကျရင် ယမ်းယမ်း ပြစ်နေကျပါ၊ မြစ်ကြိးနားမြို့ပေါ်က
Reply ချင့်ယုံ February 1, 2013 - 7:28 am အဲဒီရွာက KIA ရွာ။ တပ်ကိုဒုက္ခပေးနေတာကြာပြီ။ အဲဒီရွာမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့။အခုကိစ္စမှာ